Home » Travel Associations News » Fihaonana an-tampon'ny UNWTO ho an'ny Amerika: Teknolojia amin'ny fizahan-tany
Ny World Tourism Organisation (UNWTO), miaraka amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany any El Salvador sy ny Ivontoerana fizahantany Honduran an'ny Honduras, dia niara-nanatontosa ny fivorian'ny 61 an'ny Komisionan'ny fikambanana ho an'ny Amerika. Ny fivoriana, izay natao tao San Salvador sy Roatán ny 30 sy 31 Mey lasa teo, dia nofaranana tamin'ny seminera iraisam-pirenena momba ny teknolojia vaovao ampiharina amin'ny fizahantany .
Ny UNWTO Americas Summit (CAM) dia natao voalohany tamin'ny toerana roa - tao an-drenivohitra Salvadoriana sy tao Roatán, Honduras - ary delegasiona 20 avy amin'ny firenena 24 no nanatrika azy. Mpikambana Affiliate 13 sy mpiara-miombon'antoka mifandraika amin'izany toa ny Amadeus IT Group ihany koa no nanatrika ny fivoriana.
Ao amin'ny faritra iray izay tsy mitovy amin'ny lova voajanahary, ny fankalazana ny Taom-baovao Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana 2017 no hitarika ny adihevitra. Ny ankamaroan'ny firenena mpikambana dia nanamarika ny maha-zava-dehibe ny faharetana amin'ny politikan'ny sehatra ho sehatra iray lehibe ankoatry ny fampielezan-kevitra manerantany amin'ny Taona Iraisam-pirenena.
Ireo firenena toa an'i Kolombia sy Nikaragoa dia naneho ny fahalianany amin'ny fanitarana ny lafiny sosialy, ny maha-izy azy ary ny kolontsaina izay idiran'ny foto-kevitra momba ny faharetana mba hahatonga azy io ho lanja fanampiny amin'ny sehatry ny fizahantany. Amin'ny lafiny iray, Costa Rica, firenena mpikambana mpisava lalana amin'ny fanoloran-tena amin'ny fizahan-tany maharitra, dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fiasa amin'ny faharetana avy amin'ny rafi-pampianarana sy ao amin'ny fianakaviana, manasongadina ny filàna fampidirana ireo haino aman-jery.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny faharetana sy ny haitao vaovao no lohahevitra lehibe tamin'ny Seminera Iraisam-pirenena natao taorian'ny fihaonambem-paritra. Mpandray anjara manodidina ny 120, na iraisam-pirenena na avy eo an-toerana, no niresaka ny fironana amin'izao taranja izao, indrindra ny Big Data sy ireo sehatra vaovaon'ny serivisy fizahan-tany.
Ny sandan'ny tambajotra iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra fizahan-tany, iray amin'ireo hetsiky ny UNWTO amin'ny fanombanana ny fiantraikan'ity sehatra ity, dia iray amin'ireo teboka niteraka fifanarahana bebe kokoa tamin'ny fivorian'ny faritra.
"Ao amin'ny faritra iray izahay izay mampiseho fanao tsara marobe mifandraika amin'ny fizahan-tany maharitra izay mety hahasoa amin'ny faritra hafa manerantany," hoy ny fanamarihana nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Taleb Rifai. Ny sekretera jeneralin'ny fikambanana, izay nihaona tamin'ny filohan'ny El Salvador, José Sánchez Cerén, dia nandray nandritra ny fitsidihany ny haingon'ilay mpanolotra ny andevo José Simeón Cañas, ny lakroa volamena lehibe. Ny Governemanta Honduras koa dia nandravaka ny sekretera jeneralin'ny WTO, Taleb Rifai, niaraka tamin'ny baikon'i Francisco Morazán tamin'ny mari-pahaizana ofisialy lehibe.
Ny fivoriana CAM 62 dia hatao any Chengdu, Sina, amin'ny 12 septambra 2017 ao anatin'ny rafitry ny Fivoriamben'ny UNWTO.
Mpandeha fanandramana 200 no nofaohin'ny rano tao amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina Helsinki